warkii.com » Khasaaraha Manchester United & Chelsea Soo Gaadhi Doona Haddii Ay Usoo Bixi Waayaan Champions League
Khasaaraha Manchester United & Chelsea Soo Gaadhi Doona Haddii Ay Usoo Bixi Waayaan Champions League
Manchester United ayaa geli doonta khasaare lacageed oo weyn haddii ay Axadda berri kasoo badin weydo Leicester City, isla markaana xaqiijisan weydo booskeeda Champions League.
Chelsea ayaa sidoo kale uu ku habsan doonaa khasaare kasoo kabashadiisu adag tahay, haddii ay guul-darro kala soo kulmaan Wolves, isla markaana ay Man United iyo Leicester City barbarro galaan, sidaas oo ay Blues ay ku lumin doonto booskeeda afarta sare.
Red Devils waxay waayi doontaa lacag dhan £70 Milyan oo Gini oo ku noqon doonta khasaare ku culus xilli ay dhaqaalaha adduunka iyo midka kubadda cagtaba uu jug weyn soo gaadhsiiyey fayraska Korona oo taageereyaal la’aan ka dhigay garoomada illaa laga gaadhayo bisha October, sida uu ishaaray Ra’iisal Wasaaraha Ingiriisku.
Khasaaraha Chelsea ayaa xoogaa ka sahlanaan doona midka Man United, waxaana Blues ay waayi doontaa lacag dhan £50 milyan oo Gini, iyadoo waliba Lampard uu suuqa gelinayo lacag badan oo uu doonayo inuu dib ugu dhiso kooxda si ay xili ciyaareedka dambe horyaalka ugula tartanto kooxaha Manchester City iyo Liverpool.
Usoo bixitaanka tartanka Champions League ayay kooxaha Premier League ku helayaan ku dhowaad £80 milyan oo Gini, halka naadiyada tartanka Europa League ay ka helayaan £30 milyan oo Gini.
Laakiin United waxa kale oo kasii go’i doona £20 milyan oo Gini oo ay ka heli lahayd shirkadda dharka ee Adidas, waxaana haddii ay laba sannadood oo isku xigta usoo bixi waayaan ay Red Devils waayi doontaa £75 milyan oo Gini oo kasoo geli lahaa shirkadda.
Manchester United waxay hore u diiwaangelisay £20 milyan oo lacag ah oo ay ku weyday taageereyaasha laga joojiyey garoonka.